महावीर पुनको आविष्कार केन्द्र पुगे चीनमा बिजुली बस बनाउने कम्पनीका सिइओ – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/महावीर पुनको आविष्कार केन्द्र पुगे चीनमा बिजुली बस बनाउने कम्पनीका सिइओ
महावीर पुनको आविष्कार केन्द्र पुगे चीनमा बिजुली बस बनाउने कम्पनीका सिइओ
चीनमा बिजुली बस बनाउने कम्पनीका सिइओले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र अवलोकन गरेका छन्। सिचुवान गुवान अटोमोवाइल्सका सिइओ च्यङलिङ लोले बुधबार बिहान कीर्तिपुरस्थित पुनको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र पुगेका हुन्। च्यङलिङ लोले त्यहाँ निमार्णाधीन विद्युतिय सवारीमा विशेष चासो देखाएका थिए।
उनले सुझाव दिनुको साथै विद्युतिय सवारी साधन बनाउन चाहिने ब्याट्री मोटरलगायत सहयोग गर्ने प्रतिवद्धतासमेत जनाएको सुन्दर यातायातका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाले जानकारी दिएका छन्। सुन्दर यातायातले सिचुवान गुवान अटोमोवाइल्सका बिजुली बस सञ्चालन गरिरहेको छ।
रामायणबारे सामान्य जानकारी राख्नेलाई पनि थाहा होला कि भगवान रामको जन्म आधुनिक भारतमा पर्ने अयोध्या शहरका राजा दशरथको घरमा जेष्ठ पुत्रको रुपमा भएको थियो । रामायणका अनुशार भगवान विष्णुले आफ्ना सोह्रै कलाहरू राजा दरशथको घरमा अलग अलग रूपले श्रीराम (१३ कला), लक्ष्मण (२ कला), भरत र शत्रुधन क्रमशः एक एक कलामा विभाजीत गरेर चारवटा पुत्रको रूपमा जन्म लिएका थिए।
ती मध्ये सबै भन्दा जेठा श्रीराम जसलाई राम, रघुनाथ, राघव, रघुपति, रामचन्द्र आदी अलग अलग नामले चिनिन्छ । मर्यादा पुरुष श्रीराम पितृ बचन मान्नेहरूमा एक हुन्। उनकी माताको नाम कौशल्या थियो । राजा दशरथलाई धेरै दिन सम्म कुनै सन्तान नभएका कारण गुरु बशिष्ठको आज्ञानुशार पुत्रेष्ठी यज्ञा गराएका थिए । त्यसपछी राजा दशरथकी तिनवटी रानीहरूबाट चारवटा छोरा जन्मेका थिए।
रामायणबारे जानकारी राख्नेलाई यो पनि थाहा नहुने कुरै भएन कि भगवन राम १४ वर्ष वनवासमा रहे। र १४ वर्षपछि अयोध्या फर्किए। तर उनको मृ’त्यु कसरी भयो ? यो विषयका पछाडि भने ठूलो रहस्य लुकेको छ। पद्म पुराणमा उल्लेख गरिएको एक कथाका अनुसार, एक दिन एक वृद्ध सन्त भगवान रामको दरबारमा पुगे । उनले भगवान रामसँग एक्लै वार्ता गर्ने इच्छा व्यक्त गरे ।
त्यसपछि रामले ती सन्तलाई आफ्नो गोप्य कोठामा लगे र ढोकामा आफ्ना भाई लक्ष्मणलाई राखे । सन्तसँगको कुराकानी कसैले भंग गरे उसलाई मृ’त्युद’ण्ड दिइने रामले चेतावनी पनि दिए। लक्ष्मणले आफ्ना जेठा भाईको आज्ञा स्वीकार गर्दै उनीहरुलाई कोठमा एक्लै छाडेर आफू ढोकामा पहरा दिन बसे।
दुईजनाबीच कुराकानी चलिरहेको थियो, त्यतिबेलै ढोकामा ऋषि दुर्वासा पनि आए । उनले रामसँग कुरा गर्न चाहेको भन्दै लक्ष्मणबाट भित्र जाने अनुमति मागे । तर लक्ष्मणले जेठा भाईको आज्ञा विपरित आफूले त्यस्तो गर्न नदिने बताए।
ऋषि दुर्वासा सधैं आफ्नो अत्यन्त क्रोधका कारण चर्चित थिए । उनको क्रोधको सिकार हरकोहीले हुनुपथ्र्यो । यहाँसम्म कि स्वयम् रामको पनि । लक्ष्मणले रोक्न खोज्दा पनि ऋषि दुर्वासा आफ्नो हटबाट पछि हटेनन् । अन्त्यमा उनले लक्ष्मण र राम दुवैजनालाई श्राप दिने चेतावनी दिए।
लक्ष्मण द्वीविधामा परे कि अखिरमा आफ्नो भाईको आज्ञा तोड्ने कि उनलाई श्रापबाट बचाउने ? लक्ष्मण चाहँदैन थिए कि उनका कारण उनका भाईलाई कुनै हानी पुगोस्। त्यसपछि उनले एक कठोर फैसला लिए, आफ्नो बलि दिने।
लक्ष्मणले सोच कि ऋषि दुर्वासालाई भित्र जान नदिए रामले श्राम लिनु पथ्र्यो। तर यदि लक्ष्मणले आफ्ना भाईको आज्ञाविरुद्ध गए भने उनलाई मृ’त्युद’ण्ड मिल्थ्यो । अन्तमा उनले मृ’त्युद’ण्ड स्वीकार गर्ने निर्णय गरे र आफैं कोठाभित्र छिरे।
त्यसपछि लक्ष्मणलाई मृ’त्युद’ण्ड दिन चर्खामा बाँधियो । लक्ष्मणलाई चर्खामा बाँधिएको देखेर राम पनि धर्म संकटमा परे । उनी एकतर्फबाट आफ्नै फैसलाबाट मजबुर थिए भने दोस्रोतर्फबाट भाईको प्रेममा तड्पिँदै थिए।
त्यसबेला आफ्नो भाई लक्ष्मणलाई मृ’त्यु द’ण्ड पाउनुभन्दा पनि देशभन्दा बाहिर जान भने । त्यसबेला देशनिकालाको सजाय पनि मृ’त्युद’ण्ड बराबर नै थियो । तर लक्ष्मण आफ्नो जेठा भाई रामबिना एक क्षण पनि रहन सक्दैन थिए । आखिरमा उनले मृ’त्युद’ण्ड नै स्वीकार गर्ने निर्णय गरे।
उनी सरयू नदीको छेउमा गए र संसारबाट मुक्ति पाउने इच्छा जाहेर गर्दै त्यसमा हाम फाले । यसप्रकारले लक्ष्मणको जीवनको अन्त भयो। उनी पृथ्वी लोकबाट दोस्रो लोकमा गए । लक्ष्मण सरयू नदीभित्र गएपछि उनी अनन्त शेषको अवतारमा विष्णु लोक गए।
कोरोना संक्रमणबाट नेपालगन्ज मेडिकल कलेजमा कार्यरत कर्मचारीको मृत्यु
भाइरल अर्जुन विकको विवाह (भिडियो)
घर बाहिरै ननिस्केका व्यक्तिमा पनि देखियो कोरोना